“Neymar wuxuu ula mid noqon karaa xidigaha Ronaldo iyo Messi, haduu uu sameeyo hal arin” – Xavi Hernandez – Gool FM
“Neymar wuxuu ula mid noqon karaa xidigaha Ronaldo iyo Messi, haduu uu sameeyo hal arin” – Xavi Hernandez
(Spain) 23 Nof 2018. Halyayga kooxda Barcelona Xavi Hernandez ayaa xaqiijiyay inay adag tahay in laacibka PSG ee Neymar Jr uu la mid noqdo xidigaha Ronaldo iyo Messi, hadii uusan bedelin maskaxdiisa islamarkaana uu ka faa’idaysto xirfadiisa ciyaareed.
Xavi Hernandez ayaa u arko in Neymar Jr uu yahay ciyaaryahan weyn isla markaana uu ku raaxeesanayo xirfad iyo awood farsamo ee heersare ah, laakiin uu wali u baahan yahay inuu gaaro heerka xidigaha Ronaldo iyo Messi.
Dhinaca kale Xavi ayaa meesha ka saaray in Neymar uu ku laabanayo Barcelona xagaaga soo socda sida ay ku warameyso saxaafada Spain, isaga oo tilmaamay inaysan suurtagal ahayn inay taasi dhacdo.
“Uma maleynayo inuu soo laaban doono, ma ahayn qaab sax ka bixistiisa kooxda Barcelona, waxaan aqriyaa wargeysyo badan, laakiin waxaan arkayaa in suurtogalnimada uu ugu soo laabanayo kooxda Barcelona ay tahay eber”.
“Waa ciyaaryahan halis ah, wuxuu ku dhawaan doonaa heerka Ronaldo iyo Messi hadii uu qaan gaaro, wuxuu u muuqdaa inuu leeyahay tayada hogaamiyaha, wuxuu noqon karaa mid xushmad leh, lakiin waxay ku xiran tahay maskaxdiisa”.
Waxaa xusid mudan in Xavi Hernandez uu kaga soo garab ciyaaray Neymar Jr kooxda Barcelona mudo dhan 3 xili ciyaareed, waxayna si wada jir ah ugu wada guuleysteen tartanka Champions League sanadkii 2015-kii, xiligaas uu kooxda macalin ka ahaa Luis Enrique.